ग्राण्डीमा भयो क्रिकेट खेलाडी भण्डारीको शल्यक्रिया, अहिले अवस्था कस्तो छ ?
सडक दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका क्रिकेटका राष्ट्रिय खेलाडी ललितसिंह भण्डारीको हात र खुट्टाको शल्यक्रिया गरिएको छ । काठमाडौंको ग्राण्डी अस्पतालमा डा चक्रराज पाण्डेको टोलीले शल्यक्रिया गरेको हो । हाल उनको अवस्था सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । शल्यक्रियापछि पनि उनलाई केही समय अस्पतामै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । भण्डारी खेलमा फर्किन भने लामो समय लाग्नेछ ।
उनी गत आइतबार राति कञ्चनपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि घाइते भएका थिए । उनको कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि सोमबार काठमाडौंको ग्रान्डी अस्पताल ल्याइएको हो । दुर्घटनामा उनको दायाँ खुट्टा र दायाँ हात भाँचिएको थियो । धनगढीबाट महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको मिनिट्रकले भण्डारीले चलाएको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो । दुर्घटना लगत्तै झलारीस्थित शुक्लाफाँटा क्लिनिकमा प्राथमिक उपचारपछि भण्डारीलाई थप उपचारका लागि धनगढी लगिएको थियो ।
भण्डारी राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट खेलिसकेका बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर हुन् । पछिल्लो समय उहाँ नेपाल पुलिस क्लवबाट घरेलु क्रिकेट खेल्दै आएका थिए ।
फिफा वरियतामा नेपाल यथावत्, यी हुन् शीर्ष ५ वरियता...
क्रिस्टियानो रोनाल्डोमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई रवीन्द्र मिश्रका ८ प्रश्न– प्रधानमन्त्रीलाई खुफिया एजेन्सी तहमा झारेको हो ?
नायिका दीपिका प्रसाईंलाई प्रश्न– यो दशैंमा सबैभन्दा बढी के मिस हुँदैछ ?
दुवै हात नभएका यी व्यक्ति चिउँडोले खेल्छन् स्नूकर, जितिसके थुप्रै पुरस्कार (भिडियो)
कोरोनाका कारण कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन कांग्रेसको चियापान समारोह नहुने
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘राउटे सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने
कोरोना संकटका कारण शक्तिपीठमा चहलपहल कम
ट्य्राकमा अड्किएको कारमा ठोकियो ट्रेन, कारचालक घाइते (भिडियो)
रुस र चीनबीच सैनिक गठबन्धन बन्न सक्ने पुटिनको संकेत
दशैंका बेला टाउकोमा बञ्चरो प्रहार गरी आमाको हत्या !